खुल्यो भोजपुर काण्डको रहस्य ! विप्लवका कार्यकर्ता भन्दै प्रहरीद्धारा प्रहरीकै हत्या — Motivatenews.Com
खुल्यो भोजपुर काण्डको रहस्य ! विप्लवका कार्यकर्ता भन्दै प्रहरीद्धारा प्रहरीकै हत्या
काठमाडौं – बुधबार विहानै भोजपुर बजारमा प्रहरी र विप्लवका कार्यक्रताविच दोहोरो भिडन्त भएको खवर सबैजसो मिडियाहरु भाइरल बन्यो । साखमा दोहोरो भिडन्त नभएर प्रहरीले एकोहोरो अन्धाधुन्ध गोली चलाएका कारण एक जना प्रहरी सहित विप्लवका जिल्ला इन्चार्जको मृत्यु भएका हो ।
प्रहरीको गोली लागि विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाका ओखलढुङगा जिल्ला इन्चार्ज निरकुमार राईको मृत्यु भएको हो भने सिभिल ड्रेसमा रहेका प्रहरी जवान सन्जीव राईलाई पनि प्रहरीले विप्लवका कार्यक्रता भन्दै हत्या गरेको खुलेको छ । राई सिभिल ड्रेसमा सुराकी गर्न बजारमा खटिएका थिए । ऊनी तेही क्षेत्रमा देखा परेपछि प्रहरीको गुन्डे टोलीले ऊनको छात्तिमै गोली हानेर हत्या गरेको खवरमा उल्लेख छ । शुरुमा ऊनी बिप्लब कै कार्यकर्ता सोचेर हानेका थिए पछि ऊनको खल्तिमा रहेको परिचय पत्रबाट प्रहरी रहेको खुलेको हो ।
अन्य दुई जना प्रहरी घाईते भनिएको भनिएपनि ऊनीहरु विप्लव कार्यकर्तालाई लखेटदै जाँदा खुट्टामा चोटपटक लागेको नेकपा भोजपुरका एक नेताले बताए । विप्लव कार्यकर्तासॅग कुनै हतियार नभएको र गस्तिमा खटिएको ईन्सपेक्टरको टोलीले सिधै फायर खोल्न आदेश दिए लगत्तै ओखलढुङगा ईन्चार्जको निरकुमार राई र प्रहरी जवान सन्जीब राईको मृत्यु भएको हो ।
करिब सात जना विप्लवका कार्यक्रर्ता रहेको सुचनाको आधारमा प्रहरीले गस्ती सुरु गरेको थियो । प्रहरी आएको जनाकारी पाउनेवित्तिकै भाग्दै गर्दा राईको निदन भएको नेकपाको भनाई छ । अरु ६ जना भाग्न सफल भएका बताइएको छ । स्थानियका अनुसार प्रहरीले अन्धाधुन्दा गोली हान्दै विप्लवका कार्यक्रताको पछि पछि पुलिस गएकाले विप्लवका अन्य कार्यक्रता पनि घाइते भएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन ।